अजोड इन्स्योरेन्सको गैरकानुनी सेयर कारोबारमा मुछियो कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटल ! | Diyopost
अजोड इन्स्योरेन्सको गैरकानुनी सेयर कारोबारमा मुछियो कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटल !
काठमाडौं, २४ चैत्र । कम्पनिको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर ५० प्रतिशत हकप्रद ल्याउने भन्दै सुचना चुहाएर सेयर बजारमा चलखेल गरेको आरोपमा मुछिएको अजोड इन्स्योरेन्समाथि कारबाही शुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमै अजोडमाथि छानबीन चलेको खुलाशा भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले छानबीन समिति नै बनाएर अनुसन्धान थालेको छ । बोर्डका निर्देशक अम्बिका गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो ।
चार सदस्यीय छानबीन समितिले अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा छानबीन गरि प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सेयर बजारमा सुचना चुहाएर गत साता अजोड इन्स्योरेन्सले ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच गरेको थियो ।
यसैबीच अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ५० प्रतिशतको हकप्रद सेयर निष्काशन नै छानबीनमा पर्ने भएको छ । कम्पनिले नियामक निकायलाई समेत छलेर हकप्रद निष्काशन सम्बन्धी निर्णय गरेको पाइएपछि बिमा समितिले समेत कारबाही अघि बढाएको छ ।
गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच भएको थियो । किनबेच भएको भोलीपल्ट मंगलबार मात्रै कम्पनिले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सुचना सार्वजनिक गरेको हो । सोमबार नै अजोडको ८ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएके थियो । सो दिनको कुल कारोबार मध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात ४७ हजार ३८ कित्ता सेयर ब्रोकर नम्बर ३४ बाट कारोबार भएको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा खुलेको छ । त्यसपछिको धेरै कारोबार भने ब्रोकर नम्बर ५० बाट भएको खुलेको छ । उक्त कम्पनिबाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ब्रोकर नम्बर ३३ बाट अजोडको सेयर ४० हजार ८ सय ४० कित्ता किनबेच भएको पाइएको छ । ब्रोकर नम्बर ५० र ३३ बाट भएको कारोबार सो दिन अजोडको कुल सेयर कारोबारको १०/१० प्रतिशत हो ।
स्रोतका अनुसार उक्त सेयर खरिदमा कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटल मुछिएका छन् । उनीहरुले नै सबैभन्दा धेरै सेयर किनबेच गरेको पाइएको छ ।
कानुनले बञ्चित गरेको भित्रि कारोबार अर्थात (इन्साइडर ट्रेन्डिङ) मा मुछिएपछि कुमारी क्यापिटल र कुमारी बैंकमाथि समेत कारबाही हुने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कुमारी क्यापिटल र कुमारी बैंक यसअघि देखि नै यस्तो गैरकानुनी धन्दामा समलग्न हुँदै आएका कम्पनि हुन् ।